Ebee ka wiilị Inc Inc dị? - Wheels
Isi > Wheels > Black inc wiil - adịgide adịgide ngwọta
Black inc wiil - adịgide adịgide ngwọta
Ebee ka wiilị Inc Inc dị?
Ọ bụrụ na ị bụ ọkwọ ụgbọala na-agba ọsọ na South Africa, olee otu ị ga-esi jiri ego niile ị meriri? (mkpu) (okuku) you ga-etinye ya na diamond? You ga-etinye ya na ụlọ oyi ma ọ bụ ị ga-emefu ya iji mepụta ụdị igwe kwụ otu ebe? Taa, anyị na-ekwu maka TSW. (Cheers) (Plop) (Baby Laughs) Na 1967, Eddie Keizan, onye na-agba ọsọ egwuregwu na South Africa, kpebiri ịga n'ihu na-aga n'ihu n'ịkpụ ụkwụ na-enweghị ihe kpatara ya. Ọ nwere ọtụtụ azụmahịa dị iche iche na ngwụsị afọ 60, mana o kpebiri ịmalite ma malite Tiger Sport Wheels.
Aha ahụ dị oke egwu. Ọ dị nwute, mana Tiger Sport Wheels bụ aha jọgburu onwe ya. Mana TSW dị ntakịrị mma.
TSW hiwere n'ezie n'echiche nke iwuru igwe kwụ otu ebe maka ndị na-agba ịnyịnya. (Crash) Ma ọ dịghị mgbe ha nwere otu akụkụ. Ihe nkuku ha bu ime na wiil na South Africa.
Ha ezighi ezi n’ihu ọha ruo mgbe ngwụsị 1980s, ebe ha mechara kwụsị na Johannesburg Stock Exchange wee gbawaa. (mkpu) (pop) Ya mere, mgbe Eddie Keizan na-anwa ime wiilị alloy, ọ bụkwa akụkụ nke agbụrụ na South Africa. Ọ sonyere na asọmpi egwuregwu atọ nke Formula 1 wee merie efu.
Mana ọ nwere ike bụrụ ọkwọ ụgbọala ka mma karịa m. O doro anya na o nwere ego karịa m n'ihi na TSW malitere ma onye ọrụ ụgbọ na-ele m anya. (whoosh) - Ha na - ajụ gị otu ị dị na ihe ị ga - eme bụ ịsị na ị dị mma mgbe ị na - adịchaghị mma mana ị nweghị ike ịbanye - TSW zụtara ụlọ ọrụ akpọrọ ATS na Germany, nke nyeere ha aka inweta obere azụmaahịa karịa gburugburu ụwa, gụnyere azụmaahịa na Poland, Germany, yana United States of America. (Rock music) (mkpu) (beep) Ya mere, ebe TSW gara n'ihu na-eto eto na-eto eto, na 2001 ha kewara n'etiti usoro mmepụta OE na egwuregwu egwuregwu egwuregwu ha.
E kewara ya na Tiger Wheels na ATS. dabere na ọ bụ n'ahịa ụlọ ma ọ bụ na European mar ket. Yokohama Taya zụtara ahịa Europe maka ngwa OE. (sad horn, wah-wah-wah-wah) A na-erere wiil ndị ahịa mgbe ahịa si TSW na Terrence Schecter bụ onye bụbu onye ahịa azụmahịa TSW ma ha ka jisiri ike ịnọgide na-enwe ma ngwa ngwa OE na egwuregwu egwuregwu mgbe ahịa gasịrị.
Ma nke a bụ ebe ihe na-ara ntakịrị. TSW achịkwaala ndị na-emepụta igwe kwụ otu ebe. N’agbata oge ahụ wee ruo ugbu a, ha ewepụtala ihe ruru ụdị ịnyịnya ígwè 10, mana a mara ha ka ha were ụlọ ọrụ ndị a wee mechie kpamkpam.
Ha agaghị aga n'ihu na mmepe ha belụsọ na ha ma na ọ bụ ihe ha na ha ga - arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ gaghị abụ asọmpi nwere ike maka ụlọ ọrụ ha zụtara n'oge gara aga. TSW nwere ọganihu na US site na ịnweta GoodRoads Auto Systems. Arenye ka ị bụ ugbu a You're bụ ụlọ ọrụ Florida nke TSW zụtara ma ọ bụ weghaara ya, mana TSW nwere ọtụtụ nke ha, ya mere (ihe ọ bụla) ihe ọ bụla.
TSW nwere ọtụtụ ụdị ọhụụ ị nwere ike ịga n'ihu. Karịsịa, ha kwụsịrị ya. Ihe dị ka Ọnọdụ, XO, Ruff Racing, iji kpọọ okwu ole na ole, o yighị ka TSW ga-aga n'ihu na akara a.
Gịnị kpatara nke ahụ? Ọfọn, n'ihi na TSW na-eme nke a? Don'tchọghị ụlọ ọrụ ọzọ na-abịa n'otu ahịa ahụ dịka ihe ọzọ ị nwere. TSW nwere ihe dịka 10 ma ọ bụ 11 ụdị ha na-ejikwa ma jide nke nwere atụmanya dị elu maka aha igwe kwụ otu ebe ha, ụfọdụ n'ime ha anaghị egbutu ya. Ruff Racing, ndo nwa.
Ya mere, nke ahụ ọ bụ eziokwu na-akwado ya? Ee, ọ bụghị n'ezie. Mana ọ bụrụ na eziokwu ahụ na ihe ndekọ nnweta ha anaghị ahụ na ha nwere Ruff Racing, ọ bụ ihe ebugharị, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụ ihe ịrịba ama na ha agaghị eburu ụdị dịka Tough na XO n'ọdịnihu. Mgbasa TSW bụ ihe ike iji kwuo nke kachasị.
Ha nwere ọ dịkarịa ala ebe mgbasa ozi atọ na California. Ha na-enweta nke anọ ha na Florida GoodRoads nnweta, na ha na-ọbụna na-eme atụmatụ imeghe otu na Chi cago nke ga-enyere sikwuo ha ahịa gafee United States na 24-hour mbupu bụ nke ha mgbaru ọsọ kasịnụ. Mana nke ahụ kpasuru ndị na-eweta ngwaahịa ugbu a iwe, ka m kwuo.
Enweekwara asịrị na TSW na-abawanye ọnụahịa ha n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Wheels ya niile ka ọ gbakọọ n'èzí ụlọ ọrụ nkwakọba ihe ma bụrụ naanị ihe dị iche iche dịka Discount Taya Direct iji nyere aka na mbupu zuru oke, nyere aka na mma, mepụta onye ọ bụla iji nyere igwe kwụ otu ebe ha. O mekwara ka ndị mmadụ iwe iwe ugbu a site n’azụ na n’akụkụ ihe naanị n’ihi ihe ha na-eme ndị mmekọ ha ugbu a na ndị gara aga. Ma hey, ma ọ bụrụ na ị na-Ego Taya Direct ị na-na a zuru okè n'ebe. (croak) Yabụ TSW anaghị atụ egwu ịwụli mgbe ọ bịara n'egwuregwu igwe egwuregwu mgbe a gachara, mana kedu ka ha si nọrọ n'elu? Ọfọn, (ha) ha na-eme monobloc na rotary esorowo wiil.
Rotary ibe ya dị mfe. Ọ bụ mgbe ha biri n'etiti diski ahụ ka a na-agbazi ígwè, mana rim n'onwe ya ka ọ bụ agbanwere. Ha na-agbagharị ha nke ọma, na-agba oke ọsọ, na-eme ka ha dị ọkụ, na-etinye obere akwụkwọ mpịakọta ndị ahụ, ọ na-arụ ọrụ (akwa na-ebe ákwá).
Mgbe ahụ, ọ na-emezi usoro ọka, na-enyere aka belata ịdị arọ nke ịdị arọ ma mee ka ọ dị mfe ịnyagharị na-enweghị ịgbakwunye ibu. TSW nwere ọtụtụ wiil dị ka ọtụtụ. Ọ bụrụ n’ịle ahịrị igwe kwụ otu ebe nke TSW, ọ bụ ara.
Ha bụ aha mara mma nke ukwuu mgbe ọ na-abịakwute ntọala ndagwurugwu n'ihi na naanị ha nwere ike ịmegharị rotary forged na monoblock. Ha adighi abanye na wiil ma obu abuo abuo iji nye ha ihe okike. Oge erugo maka egwuregwu ị drinkingụ mmanya.
Aha ọ bụla m batara na TSW, anaghị m a drinkụ ihe ọ bụla. Mgbe ọ bụla m mere ihe ọjọọ, aghaghị m ị haveụ mmanya. Om-a-ru. (Ezumike) (Oge okpomọkụ) bardo. (Oge okpomọkụ) Bar-Durst, (Oge ọkọchị) Bristol, (Oge ọkọchị) Brooklyns, (Oge ọkọchị) Cattawell, (Oge ọkọchị) Casino, (Oge ọkọchị) Mallory? (Ezumike) N’eziokwu, nwanne TSW, were ya nwayo.
Enweghị m ike ịnagide ya. TSW Oslo, 83 dị iche iche nhọrọ mgbe ọ na-abịa sizing na dechapụ, nke ahụ bụ ọtụtụ nhọrọ ị nwere na wiil TSW. Ma nke ahụ bụ eziokwu banyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu n'ime wiil ha.
Ha na-arụ ọrụ dị mma nke ijide n'aka na ị nwere ọtụtụ dịgasị iche iche dị ka o kwere mee na igwe kwụ otu ebe ha na-eme. So TSW bụ akara ọjọọ? ha na-eme ụkwụ mbụ, ha nwere ụfọdụ atụmatụ dị mgbagwoju anya, ha mara ezigbo mma, ha dị oke ọnụ n'anya m mana nke ahụ bụ echiche m, mana ọtụtụ nsogbu sitere na TSW, ọtụtụ ihe kpatara ị ga-eji nwee nnukwu ihe azu azu. Ọ bụ eziokwu na ha bụ ndị mara mma nke ukwuu dị nnọọ a ego kpọmkwem taya ụlọ ọrụ.
Ha anaghị achọ iso ndị na-ere ahịa n’ onlinentanet arụ ọrụ. Ha anaghị achọ ịrụ ọrụ na azụmaahịa ndị dị n'ịntanetị. Ha anaghị enwe mmasị ịmekọrịta ihe ga-ewe nnukwu ọrụ n’aka ha.
Ọ na-amasị ha ịzụta ụlọ ọrụ, ha na-achọ ịzụrụ ma nweta ihe dị ka o kwere mee, na-akwụ ụgwọ ihe ha chọrọ idebe ma tụfuo ndị ọzọ. Yabụ karịa ịbụ onye na-emegbu mmadụ na ngọngọ ahụ, TSW, ezigbo akara ngosi. t niile merie.
Ya mere, nke a bụ akụkọ anyịnya igwe n'izu a. Imeri izu gara aga n’ihe gbasara ihe anyị nyere, cheta ndị be anyị, ọ bụ maka ihe esere, na ise. Not na-adịghị nnọọ na-emeri stof.
Nke ahụ ga-abụ puku dollar ma ọ bụrụ naanị na anyị nyere onye ọ bụla kwuru. Nke a abụghị otu o si arụ ọrụ, nke a abụghị otu o si arụ ọrụ. In na-na na merie, ya mere, onye mmeri bụ ebe a, ya mere ekele.
Ga-achọ iziga anyị ozi, mba
Email onye na - ede akwụkwọ anyị iji nweta ozi ị ga - akwụ ụgwọ n'ihi na ọ dị ka ọ chọrọ ịma. Nke a bụ Mario si Fitmentindustries.com.
Onye mmeri no ebe a. Ya mere, nke ahụ bụ ihe niile anyị nwere banyere TSW. Mee ka anyi mara n’ime ihe ikwuru n’ihu.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, nchegbu, ihe ọmụma banyere akụkọ igwe kwụ otu ebe, wdg. Ọ bụrụ otú ahụ, anyị ga-achọ ịhụ nkọwa na isiokwu ọ bụla. Maka ọtụtụ TSW iji bulie, gaa na weebụsaịtị ha www.fitmentindustries.com ma gbakwunye ụgbọ ala gị na gallery anyị ma ọ bụrụ na ị nwere TSW.
Anyị nwere di na nwunye. Anyị hụrụ gallery anyị n'anya, ụgbọala 5000 gbakwunyere. ♪ La, la. “Ma m bụ Alex si Fitment Industries.
Ka ahụ ma emechaa. Udo.
Kedu ihe kachasị mma carbon?
Ihe niileIhe mkpuchi Black Incdịarụpụtarana Taiwan, nawiilejiri aka rụọ n'otu ụlọ ọrụ.
Onye Nkọwa: Ndị a bụ igwe ọhụụ Zipp 303S dị ọnụ ala karịa, dị larịị, ma yichaa ọsọ karịa wiil 302 ha na-edochi. O yighị ka ọ ga-eme ha ikpe ziri ezi, ebe Zipp na-ekwu na ha emeela ka arụmọrụ zuru oke nke wiil a ka mma ruo ebe arụmọrụ na-egosi 303Firecrest a ma ama, nke merụrụ ahịa na 2016 ma na-akwụ ụgwọ okpukpu abụọ. N'eziokwu, achọrọ m ka ị mata ka Zipp si mee ya, yabụ ka m jupụta gị.
Nke mbu, ee, a ka m n’ulom, ma di itunanya, enwetara m aka n’oru ohuru ohuru. Ọtụtụ ekele nye Zipp maka iziga m nke a yana maka iji ndidi zaa ajụjụ m niile ka m wee nye gị nkọwa kemmiri ihe na 808 na diski. Otutu omimi nwere ụdị na ọnụahịa dị iche iche. nwere Firecres t, zipụ kpochapụwo nwere akara ngosi ya, nke ejiri ma mee ihe n'ụzọ na n'okporo ụzọ.
NSW nke na-eme ihe ọbụlagodi, mgbe ahụ ị nwere 302, nke mere ka ihe niile gbasara carbon na ikuku dị mfe ma mee ka ọ banye n'ụgbọ ala dị ọnụ ala. Ugbu a, anyị nwere ụzọ dị ọnụ ala karịa, karịa, ma gbaa ọsọ ọsọ 303 S. Kpọtụrụ aha, nwee obi ụtọ n'okporo ụzọ, yana ịga n'ihu na enweghị tube.
Yabụ kedu nke na-eme? Maka ọtụtụ akụkụ, ha nwetara akara ọhụụ, maka mmalite. Ka anyị buru ụzọ kwuo maka ihe ndị a ruuru ha, ọ bụ ya? Zipp kwuru na 303 S a bụ 10 watts karịa arụmọrụ karịa ihe ha 2016 303 Firecrest dị na 40 km / h. N'ịhapụ otu oge na ndị a dị ngwa karịa ụmụnne ha ndị dị oke ọnụ karị, echere m na ọ dịkwa ezigbo mkpa ma na-atọ ụtọ ịmara na Zipp na-agbanwe ngwa ngwa etu a gụkọtara ya, nke ahụ bụ n'ihi na Zipp na-ekwu na ha esila n'okporo ụzọ ikuku gbapụ nyocha zuru oke zuru oke na ọ bụghị naanị na-agụnye ikuku, kamakwa taya, ike.
Usoro nchịkọta data ya dị elu nke na ị nwere ike nweta nsonaazụ ziri ezi na ekwughachi n'èzí site na mkpanaka ikuku nke na-atụle ifufe na data ikuku na oge. Ndị injinia Zipp nwere iji ọtụtụ awa nọọ n'okporo ụzọ na 40 km / h. Kedu ka ndị a si akwagide n'okporo ifufe? Amaghị m.
Zipp na-ekwu na ha abụghịkwa ọsịsọ ahụ, kama nke ahụ, ha na-egosi ha na ọ bụ data ụwa gị gosipụtara na-egosi na ị dị 10 watts karịa nke ọma na 40 km / h n'okporo ụzọ na-amị amị, n'ihi na n'elu ebe siri ike nke ọdịiche ahụ na-abawanye ọbụna n'ihu. Kedu? Zipp haziri ihe ndị a ka ha wee bụrụ nke kachasị mma maka taya 28 milimita n'obosara. Nke ahụ bụ akụkụ buru ibu nke mmụba a na arụmọrụ zuru oke n'ihi na taya zuru oke na-agagharị na obere nguzogide yana enwere ike ịchụpụ ya na nrụgide dị ala, nke na-emekwa ka arụmọrụ na-agagharị.
Ndị na-ekiri ga-achọpụta na ọ bụ obere ihe dị iche karịa ka ọ dị n'etiti n'èzí na n'ime, na ee ị nọ na eziokwu n'ihi na ndị a enweghị nko. Ihe mkpuchi ọdịnala nwere obere nko n'elu nke akụkụ rim n'akụkụ ahụ, mana na mmepe ọhụụ na teknụzụ taya, ị chọkwaghị nke ahụ. Nwere ike tufuo ya ma nweta ọtụtụ uru site na ya.
Otu n'ime ha bụ ikuku. Hookless pụtara ntụgharị dị nro dị nro site na taya gaa na rim nke na-emepụta obere ọgba aghara karịa ka ị gafere ikuku. Ebe ọ bụ na obosara nke dị n'ime nwere ike ịdị obosara, taya ahụ na-ada ntakịrị na rim, nke na-emekwa ka ọgba aghara dị ntakịrị.
Ihe ndi ozo nke rim profaịlụ agbanwewokwa dika o dikwa, ochie 302, millimita iri ise na ise, ma rim di obere n ’imi karie nke ndi Zipp. Kedu maka ibu mgbe ahụ? Ha dị gram 165 karịa 302 dị n’ihu ha, nke pụtara na ha bụ naanị gram 1,530 n’ime ngwugwu. Nke ahụ bụ 710 n’ihu na 820 na azụ.
N'eziokwu, nke a abụghị nzuzu, nzuzu nzuzu, mana maka wiil nke omimi a, ike, na ọnụahịa, m ga-asị na ọ na-aga nke ọma. Kedu ka ị mere? Ọ dịkarịrị mfe mgbe ahụ? Zipp kwuru na ịkwalite usoro ihe owuwu, imepụta ebu, na ịtọgbọ carbon enyela ha ohere ịrụ ọrụ nke ọma na obere ihe. Otu n'ime nnukwu nzọụkwụ n'ihu bụ, ihe ijuanya, ihe ijuanya, ịga na-enweghị nko; ị nwere ike ịgbanwe ụzọ ha si emezi ntọala rim ahụ.
Na-agbanwe site na mandrel dị nro gaa ọdịdị ọla nke na-enye ohere ọbụna ịkọwapụta. Nwere ike iji obere resin na obere carbon rụọ ọrụ n'akụkụ a nke rim. Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere ike, ịkwesighi ịdị.
Echere m na ọ dị mma ịsị na Zipp nọ na-ajụ ihe ize ndụ mgbe ọ bụla n'ihe metụtara iwu Na nyocha ule, ha siri ike dị ka ndị bu ha ụzọ, mana ndị a nwere mmetụta ndụ na mbibi ọ bụla nke na-ekpuchi mmebi niile mgbe ị na-anya ụgbọ ala. Kedu ka ị mere? Ọfọn, ndị a bụ ndị mbụ carbon wiil wheel na-arụpụtara ná mpụga nke U. S.
SRAM, ụlọ ọrụ nne na nna Zipp, nwere ụlọ ọrụ nrụpụta carbon na Taiwan ma mepụtakwa ihe niile Zipp Indianapolis mepụtara. Usoro ebe ahụ, mana Zipp kwukwara na site na ime mgbanwe ndị a na usoro ụlọ ahụ, dị ka nko, ha mere ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. Ha na-ekwukwa na ebe ọ bụ na ha dị mfe, enwere obere ihe na ebe a.
Don't naghị anụkarị ndị nrụpụta na-ekwu na ihe dị ọnụ ala karịa n'ihi na ọ dị ọkụ, mana ọ dị elu karịa ise. Ọ na-ewe oge ịlaghachi na nke a mana ọ dị ka ọtụtụ ihe dị jụụ emeela mana otu n'ime esemokwu doro anya sitere na wiil ọhụrụ bụ akwụkwọ mmado ọhụrụ. Akara Zipp mara mma gbanwere site na nke a gaa na nke a.
Ndị na-anụ ọkụ n'ọnụ ugo ga-ahụrịrị nke a ọ bụghị naanị na ụkwụ igwe kwụ otu ebe bụ nke ebido n'afọ gara aga, kamakwa na wiil ndị otu Movistar ji mee ihe n'afọ a. Ekwesịrị ịkọwa isi ihe abụọ ikpeazụ nke mbụ hubs na-ekwu na ha nwere otu axle na freehub dị ka ndị eji na wiilị Firecrest n'afọ ndị na-adịbeghị anya, mana ebe a dị iche na n'ezie na ọnụ na ụzọ ha si abanye hub. Ndị a na-eji ọnụ ọnụ J-bend, ebe Firecrest na-eji nkwụnye ihe nkwụnye.
N'ikpeazụ, ihe dị ezigbo mkpa banyere taya ị na-eji ha. Ọ dị mkpa na ị na-eji taya na-enweghị tubes na rim ndị a dị ka ikike dị elu na stiffer beads nke taya na-enweghị tube pụtara na ha achọghị mkpa nkwekọ ahụ iji rụọ ọrụ. Nwere ike n'ezie iji eriri dị n'ime ebe a, mana ịchọrọ taya ndị a tuber-njikere.
N’oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe edemede ọzọ maka ịmaba n’ime usoro ogbugba ọhụụ ọhụụ Zipp. n'ihi na ọ bụ nnukwu ezumike maka akara ahụ, ma na nke ọ bụla, ha achọpụtala ihe na-atọ ụtọ ma na-enyekwa ezigbo uru, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịchọtaworị na mgbako mgbatị taya ọhụrụ ha, nke nwere algorithm wuru na nke kachasị. na-adịbeghị anya Research. Enwere m obere egwuregwu.
Echere m na ọ dị mma. Anyị ga-etinye njikọ ya na nkọwa dị n'okpuru isiokwu a. Nke ahụ bụ nkowa dị mkpirikpi nke ọhụụ 303 S.
Ha dị na ụlọ ahịa na-erughị $ 1,300 ma ọ bụ karịa dị n'okpuru £ 1,000 maka ụzọ nke, dịka m kwuru na mbido, na-eme ha ụfọdụ n'ime zipps dị ọnụ ala karịa taa. Jide n'aka na ka anyị mara ihe ị chere na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a ma biko nye isiokwu a nnukwu isi mkpịsị aka.
Ndi Black Inc wiil di nma?
Njikere maka ugwu na-enweghị nkwesi olu ike,Nwa Black IncIri atọwiilmasịrị anyị na njedebe, na-eburu onye nyocha anyị ka ọ bụrụ mmeri mmeri ma na-agbazinye aka n'oge agba ọsọ n'okporo ụzọ. Igwe carbon breeki rụrụ ọrụ nke ọmaBlack Inc sinwere mpempe akwụkwọ, na-enye nkwụsị a pụrụ ịdabere na ya, ọbụlagodi mgbe mmiri ozuzo kụrụ.
Lee m na Tom Van osburgh Spike nkeIsrael Startup Nation bụ mba mmalite na Factor Bikes n'afọ a na Tom họọrọ eziokwu nke van maka mkpọsa kpochapụwo ọ ga-enye ya obere nkasi obi na okwute okwute ka oke ikuku nwere ike Bụrụ ihe siri ike na ụfọdụ mkpara ga-ahọrọ igwe kwụ otu ebe na ebe siri ike ugbu a, otu ihe m chere dị mma banyere igwe kwụ otu ebe a, ọbụnadị etu o si dị, ọsọ seramiiki iji wuo COG azụ dị mma, ka anyị dị nnọọ itabi ntakịrị na Duras na-emeghachi omume na ọ na-ejekwa ezi ihe n'ihi na ọ na-ebelata esemokwu na drivetrain, nke pụtara na obere watts na-igwe kwụ otu ebe na-atụ na cobblestones nke Toms na Dura-Ace cranks na nke a kpochapụwo mkpọsa na maka ndị ọzọ nke oge ya na otu ya ma echere m na ọ na-egosi ọsọ nke peloton ụbọchị ndị a Tom nwere 5442on, de r dị ka mas Ọ bụrụ na ị chere na 42 dị na mgbanaka na ụfọdụ n'ime oge ndị a dị oke nke m na-eche ma ọ bụrụ M na-arịgo ugbu a, m na-akụ nzọ ma ọ bụrụ na ị ga-arịgo ha ofufe na a 42is bonker bụ ugbu a gị mba mmalite iji Shimano Dura-Ace? electronic ịgbanwee otú ị ga-ịgbanwee na gia levers N'ezie, ma ị nwekwara ike ịnwe nhọrọ nke na-mkpọchi niile mkpara. Tom gara maka bọtịnụ n'okpuru hoods yana gia gia na echere m na nke ahụ bara uru na ndị ochie n'ihi na mgbe ị na-ebugharị na okwute ọ na-esiri ike mgbe ụfọdụ itinye aka gị na mkpuchi ma ị chọọ ihe niile dị mma mgbe ị na-agba ịnyịnya nkume ahụ, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ike ịnya ụgbọ mmiri ahụ ma na-agbanwegharị gia, ntakịrị ịbịaru aka gị aka na-eme nnukwu ihe dị iche na ọ bụ m, achọpụtara m na ọ bụ ebe m na-asụ ngọngọ na okwute okwute na-agbali ịgbagharị na ihe na-ezighi ezi na ị ga-achọ ịga ije na mkpuchi ị ga-achọ ije ebe ahụ ma ị ga-awụli elu gị ma ọ bụ ịnwere ike ịdọrọ agbụ naanị ka ị nwee mgbanwe ahụ ma gbanwee levers ebe a mgbe ị na-na ndị tụlee bụ nnukwu perk m na-eche, dị ka bụ nwa / pink wiil kwa ezitekwara Israel mmalite mba na ha handlebars na ị dị nnọọ anya otú ahụ dị gịrịgịrị na Ogwe na-wuru na ebe a bụ nke a nifty obere ụdị arịọnụ mgbodo na i nwere ike dị tinye gị GPS kọmputa ugwu nri na Ogwe, anya dị mma n'anya ma dozie na-enye gị na ikiri n'akuku nke gị GPS kọmputa ozugbo n'ihu gị na gị. Ọ ga-eju m anya ịmata na ọ dị mfe oge ụfọdụ ịhapụ GPS ugwu na di na nwunye mgbe mbụ m malitere dị ka obere na n'okpuru 23 maka afọ mbụ.
Enwere m isi mgbe niile, mana ụbọchị ndị a, a haziri ha nke ọma ma sie ike nke na ọ bụ naanị uru ịghara inwe ike tufuo kọmputa GPS gị, mba Israel na-amalite na Blackink wiil maka afọ na nke a bụ otu ihe ahụ na mkpọsa kpochapụwo nke a gwara m na 99% nke otu ahụ họọrọ maka profaịlụ profaịlụ 60 na ọnwa mgbasa ozi nke ọnwa a, yana naanị otu onye na-agba n'okpuru na nke ahụ bụ ChrisNilanhe bụ onye tozuru oke kpebiri ọtụtụ n'ime agbụrụ ndị a maka 30 mil wheelset . M gara maka ụdị Velociter nke taya ndị a maka Mgbasa Ozi Omuma nke na-abịa na 28 mil nke njikọ siri ike ga-enye ọtụtụ nkwụsị mgbapu Jikọta nke a na mpaghara Ramsey hụrụ na otu eji ya eme ihe ma na ị nọ na onye mmeri na ngwakọta na nke ahụ nnukwu ego dị otú a na agbụrụ ndị a n'ihi na ị nwere taya, ọ ga-esiri gị ike ịghaghachi ndị njem ahụ n'okporo ụzọ a, ọ bụrụ na ị nwere ike belata ihe ize ndụ ahụ mgbe ahụ ị na-eme nke ọma, nke ahụ bụ ihe Tom van Osburgh masịrị m a igwe, ya anya dị nnọọ ịtụnanya, karịsịa agba m hụrụ n'anya, na-acha ọcha na nwa na nwa ink wiil n'ezie na-eme ka igwe kwụ otu ebe ọ bụ - Echere m na m nwere olileanya na ị mere mmasị isiokwu a, na-amasị ya mgbe ị mere, na ikwu n'okpuru. na ihe kachasị amasị gị nke igwe kwụ otu ebe
Kedu ihe bụ clincher na nke tubular?
Tubulana-agba okirikiri kpamkpam, yabụ enweghị akụkụ nke oghere taya ahụ chọrọ ka ọ dị. N'ihi ya, ndịtubularbụ naanị otu ibe, ebeonye nlekotabụ ụzọ abụọ (ọkpọkọ na taya).Tubulara na-ejikọ taya na rim ahụ, n'ihi na enweghị ụfọdụ gluu ha na-agagharị ntakịrị.
Yabụ, azụghachi m n'ụlọ ahịa na-aza ajụjụ teknụzụ gị, n'izu a anyị nwere egwu egwu, brekị siri ike, na uru dị egwu. Ọ dị mma yabụ ajụjụ mbụ anyị n'izu a sitere na William Macaulay bụ onye na-ajụ, ọ bụ onye ọkwọ ụgbọ ala ọhụụ, ihe dị mkpa bụ, ọ bụ clincher na tubular bụ otu ihe ahụ? Ajuju di uku William, taya ulo ogwu na-eji ihe abuo abuo, taya na tube di iche. Ya mere taya ahụ nwere chaplet abụọ, otu n’akụkụ ọ bụla, nke a na-ejikarị igwe anaghị ata ma ọ bụ kevlar, ma ozugbo ọkpọkọ ahụ dị n’ime taya ahụ, a na-etinye bekee ndị ahụ n’ezie ozugbo a gbanyechara ọkpọkọ ahụ ma a gafere ha site na otu Sdị obere nko na ime mgbidi nke taya ahụ jidere rim ka o wee nọrọ ebe ebe tubular na-eji tubular.
Kama nke ahụ, dịka m kwuru, ọ na-adụkọta ọnụ wee jikọta teepu isi na ozu, wee tinye ya na eriri tubular, nke ahụ nwere ike ịnwe gluu ma ọ bụ sie ike nwere akụkụ abụọ. Ọ bụ n'ezie ngwaahịa pụrụ iche pụrụ iche nke igwe kwụ otu ebe. Na nke ahụ na-ahụ na-ndokwasa na rim na nrụgide si taya na-enyere aka n'ezie na-ya na rim.
Anyị na-ahụ naanị taya nke tubular eji agba ọsọ n'ihi na taya taya na-emewanyewanye nke ọma n'ụzọ ụfọdụ, jumps na ụfọdụ na-ekwu na taya taya na-adị ngwa karịa taya taya, ebe n'oge gara aga, tubular bụ n'ezie nhọrọ ndị na-agba ọsọ ịgba ọsọ. Nakwa ebe a n'elu anyị nwere akụkọ na-akọwa ihe banyere taya tubular, taya na-ekpuchi ọrịa na njikọta tubeless.- Kedu akụkụ nke ahụ na-emetụta oke taya ahụ, nke ọma, ka anyị buru ụzọ lelee ibu ahụ.
N'okwu a, taya tubular na-atụle 1,365 gram ma e jiri ya tụnyere taya ụlọ ọrụ nke na-atụle 1,515 gram. Ọ dị mma, na-esote m nwere ajụjụ si n'aka Marie Handel onye nwere nsogbu ndekota na igwe ngagharị ahụ, yabụ nsogbu Marie bụ cassettes abụọ nwere otu ezé. Otu dị na igwe kwụ otu ebe, nke ọzọ nọ na igwe kwụ otu ebe, mgbe ị na-etinye igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe, ndị derailleur anọghị n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị iji gbanwee nke ọma n'etiti gia, n'agbanyeghị na derailleur ahụ nọ n'ọnọdụ dị mma.
Ọ dị m mma, ụda ahụ dị ka ngbanwe dị anya site na mkpọchi mkpọchi na azụ azụ yana na onye na-azụ turbo. Ya mere, ihe m na-atụ aro bụ ka ị tụọ abụọ ma lelee nke ọma ma ọ bụrụ na enwere esemokwu. Ugbu a enweghi oke ngwọta ebe a, mana gịnị ka ị ga - eme? Gbalịa itinye ihe dị gịrịmịrị na otu nke ahịrị.
Kwesịrị, ọ bụ nke mgbatị igwe kwụ otu ebe. N’ụzọ dị otu a, ịnweghị ụzọ ọ bụla ị ga - esi belata ihe ahụ nwere ike ime maka ọdịiche ahụ ma ọ bụrụ na e nwere nke ọ bụla iji tụọ ọdịiche ahụ. N'aka nke ọzọ, na-elele skewers gị, ma mgbe ị na-etufu ọnụ mmiri na ya, ọ naghị eme ka azụ azụ ahụ dị oke, ihe ọ bụla ị ga-akụ.
N'ikpeazụ, ihe niile ị ga - eme bụ ịlele ugboro abụọ na a na - emechi ihe nkedo azụ azụ n'ihi na mgbe ụfọdụ, nke a nwere ike ịgafe ntakịrị ma ghara inye gị ezigbo mgbanwe. Nke ziri ezi, ajụjụ na-esote bụ Speedbird253. Ọ nwere ụzọ ọ bụla m ga-esi belata esemokwu igwe breeki na igwe ụgbọ elu ebe igwe ikuku na-ewegharị ntụgharị? ntakịrị ihe nro na n’eziokwu ụfọdụ igwe kwụ otu ebe TT n’oge gara aga enwebeghị ike ịtụgharị aka ahụ kpamkpam, nke nwere ike bụrụ ntụpọ imewe, mana ọ dịkwa mkpa icheta na mgbe ị na-agba ịnyịnya, ị naghị atụgharị aka ahụ dị ukwuu n'ihi na ị bụ Mana nke ahụ abụghị azịza ya, ọ bụ? N'ihi na mgbe ịchọrọ ibugharị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ soro ya gaa njem, ị ga-achọ ịtụgharị aka ndị a.
Ihe m ga-atụ aro bụ ụfọdụ n'ime eriri i-Link ndị a, lee ị nwere ike ịhụ etu ha si agbanwe ma dịkwa mma maka ịgagharị na nrịgo ndị ahụ siri ike. Nke a bụ ihe m na-eji ụfọdụ igwe kwụ otu ebe m nwere na enwere m ụfọdụ nsogbu ntụgharị nke m na-enwetaghị usoro zuru oke na ị nwere eriri dị mkpa nke eriri gị dị n'ime ga-agafe, wee pịa nke a site na njikọ na ihu ọma i nwere ike iji ya na-arụ ọrụ na ndị uko amama a otutu mma na dị ka ị pụrụ ịhụ na Gịnị n'ezie ikwunye na ma e wezụga, ha na-, ị maara, ahaziri iji dabara gị igwe kwụ otu ebe. I wee gbanwee ya.
Ya mere, ndị a dị site na ụdị dị ka Nokon, Alligator na Jagwire, yabụ na ha bụ eriri ụdị eriri. Ajụjụ ikpeazụ n’izu a, ọ bụghị ezigbo ihe gbasara nsogbu ọrụ aka na igwe kwụ otu ebe, mana o metụtara akụrụngwa, yabụ ebe ị na-aga. O sitere na Brian Raney, ihe ndị a na-ekwu maka jọọ njọ ma ọ bụ gia sitere na ndị ọrụ ugbu a ma ọ bụ ndị gara aga? Ọfọn Brian, ụfọdụ uru n'oge gara aga ekwuwaala okwu, mana ha na-edebe ya n'okpuru mkpuchi n'ihi na o doro anya na akụrụngwa akụrụngwa na-enyere aka ịkwụ ụgwọ ọrụ ha, ọ bụchaghị ihe ọkachamara.
Otú ọ dị, ọ dị ndị mmadụ n'oge gara aga. David Miller bụ otu, echere m na ọ bụ n'akwụkwọ ya ebe o kwuru banyere oge ya na Cofidis na enweghị obi ụtọ na akụrụngwa enyere ndị otu. N'oge na-adịbeghị anya, Team Gb na nke mbụ ya nke ọgba tum tum ya na-eduga na Rio Olympics.
A na-ekwu okwu nke a ntakịrị ihe na pịa ebe enwere ụfọdụ nsogbu na ya. N'ikpeazụ, ọkachamara nwere ihe eji eme ihe kachasị elu ma nwee obi ụtọ na ya, n'ọnọdụ ụfọdụ ị nwere ike wepu ụfọdụ akara ngosi, hụ ihe ndekọ na ọ pụtara nke ọma mgbe emere ya n'ihi na akara ngosi na-anapụta ihe na njirimara ha mara mma, nwee obi ike ma pụta ìhè. n'ihi na ha chọrọ nlebara anya kachasị. Mana gịnị kpatara mmadụ agaghị eji ihe sitere na onye nkwado, nke ọma, ikekwe ha enweghị ihe ọ bụla na nsoro ha nke na-egbo mkpa ndị na-agba ha ma ị nwere ike ịhụ ụfọdụ na pro peloton.
Ọ dị mma, enwere m olileanya na ị hụrụ azịza ndị a nyere aka. Ọzọkwa, cheta ịhapụ m ajụjụ nyocha gị maka nkọwa m n'okpuru ebe a, m ga-anwa ịza ọtụtụ dị ka o kwere mee, echefula inwe mmasị na ịkekọrịta isiokwu a na ndị enyi gị na maka isiokwu ọzọ etu esi achọpụta ya Uru ndị ahụ na-eche maka brek diski, pịa n'okpuru.
Ogologo oge ole ka eriri carbon dị ogologo?
Nke a bụ ezigbo ajụjụ na nke kwesiri ịkọwa, nyere na ọtụtụ n'ime anyị tolitere na afọ 3-5 ndụ ogologo oge site na alloy. Azịza ya bụ na acarbon rimna-atụ anya kaikpeazụruo mgbe ọ mebiri emebi n'ụzọ na-emebi njikọ dị n'etiti resin nacarboneriri.
Rim brek akpala?
Ọgwụgwụ nkerim brekpụtara profaịlụ nke igwe kwụ otu ebe ọtụtụ n'ime anyị mụtara ịgba ịnyịnya agaala kpamkpam. Ngwa ngwa ngwa mara mma-ntọhapụ bụnwụrụ anwụ, kwa, n'ihi na thru-axle bụ ụzọ dị nchebe karị iji bulie wiil diski.
Ihe Mere Eme Mere Dị Mma?
NaIhe kpataraO2 na-bụukwuna-agba ịnyịnya kwa, na-ekwenye na mkpado ọnụahịa ya. Enwere m obi ụtọ na njikwa ya na ọsọ ọsọ ọsọ, mgbe njikwa njikwa ya ziri ezi na njedebe nkeanyịnya igweAnọla m, na-ejide akara ma na-enwe nkwụsi ike mgbe ndị ọzọanyịnya igwena-aghọkarị twitchy.8. 2020.
Ọ bụ tubless ngwa ngwa karịa clincher?
Ebe ọ bụ na ha enweghị tube dị n'ime ha, ọ ga - adịcha mfe ma na n’ikpeazụ, ọ na - akacha mmangwa ngwa! Okporo ụzọtubelesstaya 'Rolling eguzogide bụ alakarịanke ha abuondị nlekọta ụlọna tubulars n'ihi esemokwu dị n'etiti tube na casing na-ekpochapụ.
Gini mere eji eji taya tubular eme ihe?
Ọbụna site na arụmọrụ,tubular tayaezi uche makamakandi ogba oso. Atubularamachibidoghi ya n'akụkụ akụkụ ya, ya mere ọ nwere ike ịgbanwe karịa. Nke a pụtara na a 25 mmtubularna-enye gị mmetụ ahụ dị egwu nke 28 mm clincher bara uru mgbe ị na-agbadata ugwu na-agba ọsọ gafere ọsọ.
Ngwongwo carbon ọ na-agbaji ngwa ngwa?
Ọtụtụcarbonodida ime n'ihi ike rim etiwapụ ma ọ bụ irighiri ihe ọkụkụ nawiil. Mmebi site na rim etiwapụ na irighiri ihe na-apụta na cyclocross na gravel ịnyịnya kwa, ma ọ dị ntakịrị ihe na-adịkarịghị n'ihi ọdịdị nke mbara ala. Ọ dị obere karịa imebicarbon wiilmgbe ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ.07.01.2020
Kedu ụdị wiil nke Black Inc na-eji?
Black Inc nwere ezigbo elebara anya na mgbatị na-arụ ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ na-eji eriri carbon maka wiil ya niile, na-enye 30mm, 50mm, na 80mm rims, gbakwunyere igwe diski azụ. Ndị na-azụ ahịa ga-ahọrọ n'etiti nsụgharị tubular na nsụgharị maka wiil niile nwere ụkwụ, ma agbanyeghị azụ diski azụ dabara maka taya taya.
Ole ndị bụ ndị nwe Black Inc?
Black Inc bụ ụlọ ọrụ na-emepụta carbon ọhụrụ dị ọhụrụ nke nwere nkwado na nkwado nke ụfọdụ ndị ọkaibe ndị ọkachamara, gụnyere Baden Cooke na David Millar. Enwere ụdị atọ dị na katalọgụ nke Black Inc ugbu a, na nyocha a, onye nchịkọta CTech bụ Matt Wikstrom na-anwale otu n'ime ha,
Gịnị na-eme Black Inc Black iri atọ rim brek wheelset mma?
Black Black iri atọ abụghị naanị wheel wheel. Ọ accelerates dị ka mba ọzọ wheel ruru ya ikenyeneke mbiet rim isi, rim profaịlụ na zuru okè kwuru erughị ala. Tụnyere ndị ọzọ yiri profaịlụ wiil, Iri Atọ nwere a wider rim, nke na-eme ya nnọọ ihe aerodynamic. Imirikiti wiil dị nfe na ahịa anaghị adịkarị.